Isniin - Sabti 7:00AM ilaa 9:00AM
Maxaan samayn karnaa?
Qaybaha Auto Mold
Alaabooyinka Warshadaha Caaryada
Caaryada Alaabooyinka Guriga
Mootada & Mootada Mootada
Aqoon isweydaarsiga & Qalabka
Falanqaynta qulqulka qulqulka
Socodka Habraaca Caaryada
Shaxda Socodka Eegista Caaryada
Hello, kaalay inaad la tashato alaabtayada!
Waa maxay mabaadi'da iyo sifooyinka cirbadeynta kululeeyaha kulul?
Caaryada duritaanka orodka kulul waxa kale oo loo yaqaan caaryada duritaan la'aanta. Farqiga u dhexeeya habka shubista iyo habka caadiga ah ee wax-soo-saarka ayaa ah in inta lagu jiro dhammaan habka wax-soo-saarka, balaastigga habka shubanka ah ayaa had iyo jeer ku jira xaalad dhalaalaysa, cadaadiska cadaadiska inta lagu jiro duritaanka waa yar yahay, a ...
Sidee loo naqshadeeyaa caaryada adag ee tuubooyinka foorarsiga baabuurta?
1. Marka hore dhig badbaadada iyo ku habboonaanta wax soo saarka "Macaamiishu waa Ilaah" kaliya maaha ujeedada warshadaha adeegga, laakiin sidoo kale ujeedadayada. Qaabaynta duritaanka, isbarbardhigga ayaa ah shayga ugu horreeya, ku habboonaantana waa labaad. 2. Raac macmiilka...
Taxadirka soo saarida caaryada kursiga
1. Ka-hortagga ka-hortagga walxaha caaryada kursiga looma baahna, sababtoo ah balaastiggu waa jilicsan yahay oo uma baahna shuruudo gaar ah sida qallafsanaanta, iyo habka daaweynta kulaylka ayaa laga yaabaa inay keento caaryada si ay u qaabeeyaan. 2. Qaboojinta (marabka biyaha) ee ku jira qaabka kursiga waxay la xiriirtaa arrimo ay ka mid yihiin pr...
Maxaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho soo saarista caaryada
Maaddaama aan la xiriirno warshado soo saara caaryada oo aad u badan, ma ogtahay waxa ay yihiin tillaabooyinka naqshadeynta caaryada caagga ah? Maxay yihiin xirfadaha lagama maarmaanka u ah in naqshadeeyayaasha caaryada ee warshadaha caaryada ay u baahan yihiin inay horumariyaan? In kasta oo aanay arrintani ahayn mid aynu aad uga walaacsanahay, haddana waxay u baahan tahay in la fahmo....
Xeerarka feejignaanta ee naqshadeynta caaryada duritaanka
1. Jihada furitaanka caaryada iyo xariiqda kala qaybinta Badeeco kasta oo duritaan ah waa in ay marka hore go'aamisaa jihada furitaanka caaryada iyo xariiqda kala qaybinta bilawga naqshadaynta si loo hubiyo in habka soo jiidashada xudunta u ah la yareeyo iyo saamaynta khadka qaybinta ee muuqaalka la tirtiro. . 1) Af...
Taariikhda horumarinta caaryada qalabka guriga
Marxaladda hore ee dib-u-habaynta iyo furitaanka, qalabka guryuhu waxa uu xambaarsanaa rabitaanka dadka ee nolol wanaagsan, waxayna ahaayeen calaamad ka mid ah calaamadaha muhiimka ah ee heerka nolosha maaddada ee qoyska. 40kii sano ee la soo dhaafay ee dib u habaynta iyo furitaanka, horumarinta qalabka wax soo saarka ee guriga...
Farsamada farsamaynta qaybaha caaryada
Si loo hubiyo macquulnimada iyo joogtaynta tignoolajiyada samaynta caaryada iyo farsamaynta, tayaynta tignoolajiyada farsamaynta, iyo wanaajinta horumarka samaynta caaryada, warshad kasta oo caaryada guud ahaan waxay dejisaa heerarka nidaamka ku habboon warshadda. 1. Farsamoyaqaanku waxa uu ururiyaa cra...
Habka laga bilaabo naqshadaynta caaryada ilaa tijaabada caaryada (qaybta 2)
Maqaalkii ugu dambeeyay, waxaan ka hadalnay qaybta 1 ee naqshadeynta caaryada ee habka tijaabada ah ee tijaabada, ka dibna waxaan sii wadi doonaa inaan kuu sharaxno. 2. Xaqiijinta, dib u eegista, baafinta, iyo dirida sawirada (1) Xiriirka ka dhexeeya caaryada iyo qaybihiisa iyo sawirida qaybta caaga ah Haddi...
Sharaxaada habka laga soo bilaabo naqshadeynta caaryada ilaa tijaabada caaryada
Sawir jaantuska caaryada Ka hor inta aanad sawirin sawirka shirka caaryada, sawirka habka waa in la sawiraa, waana in uu buuxiyaa shuruudaha sawirka qaybta iyo habka xogta. Cabbirka dammaanad-qaadka habka soo socda waa in lagu calaamadiyaa ereyada "xajmiga habka" ee sawirka. Haddii ka dib...
Tobanka Dhib ee ugu Sareeya ee Tijaabada Caaryada
Dhibaatooyinka caadiga ah ee tijaabada caaryada 1: Orodyahanka ugu weyn wuxuu ku dhegganaa caaryada Habka iyo nidaamka loo xalliyo dhibaatada: 1 Tooshashada orodyahanka ugu weyn → 2 nozzles waxay ku beegan tahay bartamaha caaryada → 5 kordhinta wakhtiga qaboojinta → 6 che...
Sidee buu u dhacaa "burr" ee caaryada cirbadda?
Alaabooyinka qaabaynta duritaanka waxay tixraacaan caagadaha la kululeeyay, balaastigga lagu sameeyay oo lagu dhalaalay mishiinka wax-qaabaynta duritaanka, ka dibna lagu duro daloolka caaryada wax-qaabaynta Ka dib marka la qaboojiyo, dhalaalku waa la adkeyn doonaa waana la dumin karaa, mishiinka wax-qaabaynta duritaanka waa la qaabeeyey. Fl...
Saamaynta 5 ee heerkulka caaryada ee ilaalinta tayada qaybaha la isku duro
1. Saamaynta heerkulka caaryada ee muuqaalka sheyga Heerkulka sare wuxuu hagaajin karaa dareeraha resin-ka, kaas oo inta badan ka dhigaya dusha qaybta mid siman oo dhalaalaya, gaar ahaan si loo hagaajiyo quruxda dusha sare ee fiber-ka muraayadda ah ee la xoojiyay qaybaha resin. Waxay kaloo wanaajisaa xoogga iyo rabitaanka...
123456 Xiga > >> Bogga 1/6
Hal qayb oo ka mid ah Aojie Mold Co., Ltd.
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada, fadlan ii-maylkaaga noogu dhaaf oo nala soo xidhiidh 24 saacadood gudahood.